Eoropa " Journey-Assist - Manerana an'i Eropa. Ireo firenena eoropeana.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Eoropa
Ireo firenena eoropeana
MPANJAKA TSY MISY
Eoropa - iray amin'ireo faritra enina eto amin'izao tontolo izao, ampahany amin'ny kaontinanta lehibe indrindra any Eurasia, izay hita any amin'ny ilantany avaratry ny Tany.
Tany Gresy taloha, "Eoropa" (avy amin'ny Asybus erebus - andrefana) dia nantsoina hoe ny faritany atsinanana andrefan'ny Ranomasina Aegean.
Mandrakotra velarana 10 tapitrisa kilometatra toradroa izy io. Sasa amin'ny ranomasina Arctic, ny Ranomasimbe Atlantika sy ny ranomasina izy ireo.
Ny mponina dia 745 tapitrisa ny mponina, izay ny 10% -n'ny mponina eran-tany. Efa mahazatra ny manala an'i Atsinanana, Western, Central ary Eoropa Avaratra.
Misy fanjakana 55 ao amin'ny faritany, 43 izay eken'ny ankamaroan'ny mpikambana ao amin'ny ONU.
Ny firenena lehibe indrindra any Eropa amin'ny lafin'ny velarantaniny dia i Russia, na dia ny ampahany amin'ny faritaniny ihany aza no an'ity faritra ity (3,7 tapitrisa km. Km).
Ny kely indrindra dia ny tanànan'ny tanànan'i Vatikana (0,44 sq. Km), ivon'ny Kristianisma, tranombakoka misokatra malalaka, fitahirizam-bokin'ny asa kanto sy tsangambato maritrano.
mahazatra fivavahana - Kristianisma. Raha ny tantara no jerena dia manaraka izao ny finoana:
- Katolika: Italia, Espana, Portugal, Malta, Irlanda, Belzika, France, Luxembourg, Austria, Polonina, Repoblika Tseky, Slovakia, Hongria.
- Ortodoksa: Romania, Bulgaria, Gresy.
- Protestanta: Failandy, Suède, Norvezy, Danemarka, Islandy.
Ny fiteny romance dia manjaka eo amin'ny faritry ny faritra eropean'izao tontolo izao - frantsay, italianina, espaniola. Ny teny anglisy sy ny fiteny alemà hafa dia mahazatra ihany koa. Any Eoropa Atsinanana dia miteny fiteny slavia, any avaratra, Skandinavianina ary Baltika.
Ny fikambanana politika lehibe indrindra any Eropa - Ny Vondrona Eoropeana, izay ahitana firenena Eoropeana 28. Namolavola ny sendika ny politika iraisana eo amin'ny sehatry ny varotra, ny fambolena, ny jono ary ny fampandrosoana isam-paritra.
Ao amin'ny faritanin'ny fanjakana 26 Schengen faritratafiditra ao anatin ny fanafoanana ny fifehezana pasipaoro.
Ny sisintany eo anelanelan'i Eropa sy Azia dia mandeha amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Tendrombohitra Ural, ny renirano Emba, ny ranomasina ao Caspian, ny fahakiviana Kumo-Manych ary ny vavan'ny Don.
Tantaran'i Eropa: ny ilany avaratra dia Cape Nordkin (Saikinosy Skandinavia), ny atsimo kosa dia Cape Morroka (Saikinosy Iberian), ny fandrika dia Cape Roca (Saikinosy Iberian), ny atsinanana no morontsiraka atsinanan'ny Polar Urals.
Ny ampahany fahefatra amin'ny faritra manontolo dia notazonin'ny peninsulas: Kola, Apenninsky, Balkans, Pyrenees, Scandinavians, sns.
Ny nosy lehibe indrindra izay an'i Europe: New Earth, Franz Josef Land, Spitsbergen, Islandy, anglisy, Zealand, Balearic, Corsica, Crete, Sardinia, Sicily.
Ny toerana avo indrindra dia ny Mount Elbrus (5642 m, Caucasus Mountains any Russia), ny ambany indrindra dia -27 m (Ranomasina Caspian).
Sasa avy amin'ny ranomasina izy: Northern, Baltic, Mediterranean, Black, Azov, Norwegian, Barents, Kara, White.
Ny Dnieper, Volga, Rhine, Danube, Elba, Don, Kama, Oder - ireo rehetra ireo dia renirano any Eropa.
Ny ankamaroan'ny faritany dia tototry ny lemaka. 17% ny velarana dia tendrombohitra sy lembalemba (Ural, Carpathians, Pyrenees, Alpes, tendrombohitra Skandinavia, tendrombohitra Crimea, tendrombohitra ny saikinosy Balkan.
Any Eoropa dia hita any amin'ny faritra voajanahary maro: ny lemaka Arctic, tundra ary ala-tundra, ala mirehitra ary ala mifangaro, ala-làlan-kianja, havoana, ala ala any Mediterane, semi-efitra.
Misy tahiry lehibe amin'ny menaka sy entona, arina sy lignite, ores vy, varahina, zinc ary firaka. Ny ankamaroan'izy ireo dia mihena, noho izany faritra izany dia mila ny fanafarana ny loharanon-karena mihoatra ny sisa eto amin'izao tontolo izao.
Raha tsy misy fidiran'ny olombelona dia ho rakotra ala ny faritany Eropa. Ankehitriny, mipoaka ny ala mikitroka manerana ny morontsirak'i Atlantika, manome lalana amin'ny ala mifangaro. Ireo karazana hazo eropeana dia ny beech sy oak, izay somary linden sy sungbeam matetika. Ny tontolon'ny fambolena ao Eropa koa dia tsy azo eritreretina raha tsy misy hazo masinina ary ahitra maitso.
Ny zavamaniry amin'ity tontolo ity dia maro sy manankarena. Ao amin'ny avaratra, ny karazana tena mahazatra dia: polar hare, bears polar, seal, arctic fox, walrus, reindeer ary maro hafa. Any atsimo, amin'ny toetrandro malefaka, dia misy amboadia, bera, amboahaolo, serfa, ary bozaka. Tsy maintsy miady amin'ny olombelona ny biby noho ny fonenany.
Ny firoborobon'ny fandrosoan'ny indostria any Eropa dia nahatonga ny fihenan'ny tsikelikely ny harena voajanahary sy ny fahasimban'ny tontolo iainana.
Ny faritanin'i Eoropa dia mizara eo amin'ny fanjakana mahaleo tena miisa 43 eken'ny ONU, misy koa repoblika 6 tsy fantatra (Kosovo, Abkhazia, Ossetia atsimo, Transnistria, LPR, DPR) ary faritany miankina 7 (any amin'ny Oseana Arktika sy Atlantika). Fanjakana 6 no an'ny antsoina hoe microstates: Vatican, Andorra, Liechtenstein, Malta, Monaco, San Marino. Ampahany any Eropa ny faritry ny fanjakana toa an'i Russia - 22%, Kazakhstan - 14%, Azerbaijan - 10%, Georgia - 5%, Torkia - 4%.
Firenena eropeana niray hina tamin'ny fikambanana nasionaly Vondrona Eropeana (EU)hanana vola mahazatra Euro, fomba fijery ara-toekarena sy politika.
Araka ny famantarana ara-kolontsaina, ara-jeografika sy ara-politika, ny faritanin'i Eropa manontolo dia mizara ara-dalàna amin'ny tandrefana, atsinanana, avaratra, atsimo ary afovoany.
mponina Mampiavaka an'i Eoropa ny fahasamihafana sy ny foko isan-karazany. Raha fintinina dia zom-pirenena 87 no vakiana, ka 33 amin'izany no firenena lehibe indrindra amin'ny fanjakan'izy ireo. 54 - foko vitsy an'isa any amin'ny firenena onenan'izy ireo
Ireo firenena eoropeana be dia be indrindra: Rosiana, Alemanina, Frantsay, Espaniola, Italiana, Poles, Ukrainianina.
Miadana ny fitomboan'ny mponina, ary ny salanisan'ny taona dia somary avo lenta amin'ny kontinanta eran'izao tontolo izao.
Ny fiteny mahazatra indrindra dia Rosiana, Alemanina ary frantsay.
Ny fomba amam-panao sy ny fomba amam-panao avy amin'ny firenena eoropeana dia niforona tamin'ny sehatra kolontsaina tokana. Ireo eoropeana dia mpandala ny nentin-drazana, falifaly sy lalina ara-panahy, voafehy sy ara-pihetseham-po, manaja ny fomba nentim-paharazana sy ny tantara, manaja ny fianakavian'andriana, malaza amin'ny tia mandray vahiny, tia natiora, manaraka ny fomba fiaina mahasalama, manao fandaharana fety sy fankalazana nentin-drazana.
Ity faritra eto amin'izao tontolo izao ity dia manankarena jerena sy tsangambato ara-tantara voatahiry. Ny tena malaza amin'izy ireo: ny Vatikana - ny fonenan'ny Papa, Gresy taloha - ny toerana nahaterahan'ny filozofia sy ny demokrasia, ny Eiffel Tower, ny Louvre, Versailles any Frantsa, ny Coliseum ao amin'ny tanàna tranainy indrindra amin'ny planeta Roma, ireo tetezana sy lakandranon'i Venise, ireo volkano sy riandranon'i Islandy, ireo fjords any Norvezy, Stonehenge , Tower ary Big Ben, Nosy Khortitsa - toerana nahaterahan'i Cossacks ary maro hafa.
Raha ny filazan'ny ONU dia misy firenena roa any Eropa izay ny mponina no mahatsapa ny fahasambarana indrindra eto an-tany - Norvezy sy Danemark
Ny tetezana lehibe indrindra dia any Hamburg, Alemana - manodidina ny 2300 amin'izy ireo ny totaliny. Izany dia mihoatra ny ao St. Petersburg, Amsterdam ary Venice mitambatra.
Any amin'ny firenena rehetra any Eoropa kontinenta, ny fifamoivoizana fiara dia havanana. Saingy, any Paris dia misy làlana Lemontieu misy halavany 350 metatra manana fifamoivoizana havia.
Any Aotrisy sy Alemaina Miaraka fandroana sy sauna miaraka ny lehilahy sy vehivavy. Amin'ny tranga toy izany, tsy ekena ny fiafenana any ambadiky ny akanjo any amin'ireny firenena ireny.
Ilay firenena kely indrindra any Europe hifanaraka tanteraka Roma - Vatikana... Nahazo fahaleovan-tena tamin'i Italie tamin'ny taona 1929 ny fanjakan'ny Papa. Ny velarantaniny dia 0,44 sq. Km.
Ny tanàna eropeana manana anarana lava indrindra dia any Wales (UK). Lanfairpwllgvyngyllgogerychwyrndrobwllllant no iantsoana azy.
Toerana malaza amin'izao tontolo izao